ရောင်းရန်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၊ Volvo ဒီဇယ်မီးစက်၊ ဒီဇယ်မီးစက်ရောင်းချသူ ရောင်းရန်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၊ Volvo ဒီဇယ်မီးစက်၊ ဒီဇယ်မီးစက်ရောင်းချသူ
Silent Diesel Generator Set ၊
25kVA ~ 3000kVA အသံတိတ်မီးစက်များ
Containerized Generator များ
Diesel Genset အမျိုးအစားကိုဖွင့်ပါ။
Silent Type Diesel Genset ၊
အင်ဂျင်နှင့် Alternator Spare Parts
Dingbo Cloud ဝန်ဆောင်မှု
ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ Set +
Silent Diesel Generator Set ၊ +
0 ၁ ၂ ၃ ၄
DINGBO Cloud လိုင်းဝန်ဆောင်မှု
DINGBO cloud ဝန်ဆောင်မှုပလပ်ဖောင်းသည် မိုဘိုင်း APP နှင့် ကွန်ပျူတာမှ သတ်မှတ်ထားသော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ လည်ပတ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် ပံ့ပိုးကူညီမှု။၎င်းသည် သင့်အား ဂျင်နရေတာအစုံလိုက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ၊ မြန်ဆန်ပြီး ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုကို နိုင်ငံတကာတွင် တစ်နေရာတည်းရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု၏ဖြေရှင်းချက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ သင်၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိသောမီးစက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်။
1. အဝေးထိန်းခလုတ်။အင်ဂျင်နှင့် alternator အတွက် "အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီအခြေအနေ" ကိုပြသပါ။အလိုအလျောက်/လက်ဖြင့် ရပ်တန့်/စတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။
2. အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်း- အမြန်နှုန်း၊ ရေအပူချိန်၊ ဆီဖိအား၊ အရည်အဆင့်၊ ဘက်ထရီဗို့အား၊ အားသွင်းဗို့အား၊ ပါဝါအချက်၊ သုံးဆင့်လက်ရှိ၊ သုံးဆင့်ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ စသည်တို့။
3. “အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာ”။ဒီဇယ်အင်ဂျင် လည်ပတ်ချိန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နှစ်သစ်စသည်ဖြင့် စုဆောင်းထားသည်။ဂျင်နရေတာမှ စုဆောင်းထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
4. မကြာသေးမီ3လအတွင်း genset ၏ လည်ပတ်မှုဒေတာကို သိမ်းဆည်းပါ။
DINGBO POWER သည် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီကို 2017 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်၊ DINGBO POWER သည် Cummins၊ Volvo၊ Perkins၊ Deutz၊ Weichai၊ Yuchai၊ SDEC၊ MTU တို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး အရည်အသွေးမြင့် genset ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ၊ Ricardo၊ Wuxi အစရှိသည်တို့၊ ပါဝါစွမ်းရည်အကွာအဝေးသည် 20kw မှ 3000kw အထိဖြစ်ပြီး၊ အဖွင့်အမျိုးအစား၊ အသံတိတ်ခန်းအမျိုးအစား၊ ကွန်တိန်နာအမျိုးအစား၊ မိုဘိုင်းနောက်တွဲယာဉ်အမျိုးအစားတို့ ပါဝင်သည်။ယခုအချိန်အထိ၊ DINGBO POWER genset ကို အာဖရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့ထံ ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဗျူရိုအတွက် 600KW Cummins Genset ကိုအသုံးပြုသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်အတွက်အသုံးပြုသည့် 800kw Generator
မိသားစုစီမံကိန်းဗျူရိုအတွက် 350KW Yuchai Genset ကိုအသုံးပြုသည်။
250kw အသံတိတ် Genset ကို အာဖရိကသို့ တင်ပို့ခဲ့သည်။
အိမ်ခြံမြေအေဂျင်စီအတွက် 500kW Yuchai Diesel Genset Power
တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော ဖိအားမြင့်ဘုံမီးရထားလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော single pump လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည့် 500kW ဂျင်နရေတာအစုံကို မကြာသေးမီက အောင်မြင်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
Shangchai Power သည် မီတာ 5000 Plateau Verification ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။
မတ် ၂ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
သတင်းကောင်း!Shangchai ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ 1000kw 800kw 50kw 75kw သည် ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကို အကဲဖြတ်ပြီးနောက် အလွန်ကြမ်းတမ်းသောကုန်းပြင်မြင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
Skype- +86 134 8102 4441
သင့်အီးမေးလ်ကို ထည့်သွင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ရယူပါ။
မူပိုင်ခွင့် © Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved | ဆိုက်မြေပုံ